Iye zvino inowanikwa vhezheni 127 yeSafari Technology Preview | Ndinobva mac
Kwenguva yakareba isu tanga tichitaura nezve mabhenefiti eiyi Apple yekuyedza browser uye kunyanya pamberi pevashandisi vanove ivo pakupedzisira avo vanogamuchira zvigadziriso zvinoitwa mairi. Nezvechikamu chayo, Apple iri kuramba ichingogadzirisazve kubva pakatangwa Safari Technology Preview kekutanga, chimwe chinhu chinokosheswa uye icho zvakare vanoita zvakanaka kukudziridza yepamutemo browser.
Isu tinoona zvichikosha uye kunakidza kuti Apple inoramba ichibheja pane iyi browser kuti iedze nayo, ichisiya Safari yakakwenenzverwa sezvinobvira mushanduro yayo yepamutemo. Nenzira iyi, zvirinani uye zvepamusoro kuita kunowanikwa mubrowser pasina kukanganisa zvakananga kushandiswa kunoitwa nemamiriyoni evashandisi pazuva. Kuva nevashandisi vazhinji vachishandisa idzi dzekuedza shanduro dzebrowser kunobatsira iyo kambani pachayo ku ona zvikanganiso uye nekuvandudza mashandiro ebrowser yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Safari Technology Preview vhezheni 127 ikozvino yavapo
Mushandisi anovaka komputa inobatwa nemaoko neMacOS Big Sur